Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tăng cân chuẩn theo 7 nguyên tắc | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tăng cân chuẩn theo 7 nguyên tắc | Muasalebang in Muasalebang
Imenyu yokulumula yezinyanga ezi-5 ingane Ifaneleka kanjani? Yiziphi izimiso lapho ukulunyulwa kwengane enezinyanga ezi-5 ubudala? Iyiphi indlela yokulumula okufanele abazali bayikhethele ingane yabo? Isihloko esilandelayo sizosikisela ukuba uphendule yonke imibuzo engenhla ngendlela ecacile neningilizayo. Mema abazali ukuthi babonisane.
1 Izimiso zokudla okuqinile kwezingane ezinezinyanga ezi-5 ubudala.
1.1 Izithako zokudla okunomsoco ezidingekayo lapho wakha imenyu yokulumula yezinyanga ezi-5
1.2 Izimpawu zokuthi ingane yakho isilungele ukudla okuqinile
2 Imenyu yokulumula yengane enezinyanga ezi-5 ukuze ikhule kahle futhi ikhule kahle
2.1 1. Impushana yethanga exutshwe nobisi
2.2 2. Impushana yamazambane, amaqanda, ukholifulawa.
2.3 3. Impuphu yamazambane, ukholifulawa, ubisi.
2.4 4. Impushana yenyama yenkukhu yamazambane amnandi.
2.5 5. Inyama yengulube nemifino
3 Imenyu yokulumula yezinyanga ezi-5 ingane ngezinsuku ezingama-30 ngesitayela saseJapan
3.1 Izinsuku 1, 2 no-3:
3.2 Izinsuku 4 no-5:
3.5 Usuku 8:
3.8 Usuku 11:
3.11 Usuku 14:
3.14 Usuku 17:
3.16 Usuku 19:
3.17 Usuku 20:
3.18 Usuku 21:
3.20 Usuku 23:
3.21 Usuku 24 + 25:
4 Amanothi okupheka iphalishi lengane enezinyanga ezi-5.
4.1 Ungasebenzisi amanzi abandayo ukupheka uphuthu lwezingane.
4.2 Ungalibilisi iphalishi (ushise kabusha iphalishi) izikhathi eziningi ngosuku olungu-1
4.3 Kufanele ukhethe imifino yonyaka ukuqinisekisa ukuphepha kokudla.
4.4 Ungakushisi ukudla emanzini ashisayo noma ukushiye endaweni efudumele.
4.5 Inothi elincane lomama abasebenzisa amanzi edashi ukupheka uphuthu lwezingane zabo
Izimiso zokudla okuqinile kwezingane ezinezinyanga ezi-5 ubudala.
Ezinyangeni ezi-5 ubudala, izingane eziningi zinesidingo sokuluma futhi zilungele ukuya esigabeni sokulunyulwa. Izindlela zamanje zokulumula ezisetshenziswa omama ukulumula ngokwesintu, ukulunyulwa ngendlela yaseJapane, nokulumula okuholwa yingane (BLW).
Xem Thêm Tổng hợp 20+ mẫu cắm hoa bàn thờ đẹp, dễ cắm | Muasalebang
Nokho, lesi yisigaba sokuqala kuphela senqubo yokulunyulwa, ngakho omama kufanele babambelele ezimisweni ezithile mayelana nemenyu yokulunyulwa kwengane yabo enezinyanga ezi-5 ubudala ngale ndlela elandelayo:
Inani lokudla ngosuku: 1 isidlo/ngosuku. Ingase ikhule ngemva kwezinsuku eziyishumi kuya kweziyi-15 lapho ingane idinga ukudla okwengeziwe.
Inani lefomula/ubisi lwebele: Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi ingane yakho ithola inani elifanele lobisi eludingayo. Ungaphoqi ingane ukuthi idle kakhulu noma unciphise ubisi ukuze ingane idle ukudla okuqinile.
Ukuqina kokuqinile: Ukudla kwezingane kungacwengeka noma kuthambe ngokwanele ukuze ingane yakho ikwazi ukukuhlafuna nokugwinya kalula.
Imenyu yokulumula yezingane ezinezinyanga ezi-5 kufanele ibe ngokulandelana kweqembu I, iqembu II bese kuba yiqembu III.
Iqembu I: Izitashi kanye nokusanhlamvu.
Iqembu II: Imifino nezithelo. Izingane ezisanda kuzalwa akufanele zidle ubhanana ngokushesha.
Iqembu III: Inkukhu, ingulube, inhlanzi emhlophe.
Landela isimiso sokudla kusukela kokuncane ukuya kokuqinile, kusukela kokuthambile kuye kokuqinile ukuze isimiso somzimba somntwana wakho sokugaya sikwazi ukujwayela kalula lokhu kudla okusha.
Yidla kusuka kancane kuye kakhulu: Qala ukondla ingane yakho kancane kancane. Vumela ingane ifunde ukujwayela kanye nokugwema ukuphazamiseka kokugaya ukudla.
Yidla okumnandi ngaphambi kokuba ube nosawoti omningi kamuva: Vumela ingane yakho ifunde ukudla i-MSG, bese ishintshela kumpushana onosawoti ekuseni ukuze ugweme i-anorexia yengane kamuva.
Izithako zokudla okunomsoco ezidingekayo lapho wakha imenyu yokulumula yezinyanga ezi-5
Ezinganeni ezincela ibele kuphela, lapho ingane inezinyanga ezi-4 ubudala, inani le-iron ne-zinc eligcinwe ku-fetus liya ngokuya lincipha futhi nenani le-ayoni obisini lwebele lincane kakhulu, alanele ukuhlangabezana nezidingo zomntwana.
Ezinganeni eziphuza ubisi lwebhodlela, omama akudingeki bakhathazeke ngale nkinga. Nokho, lapho enikeza ingane enezinyanga ezinhlanu ukudla okuqinile, umama kusadingeka aqinisekise ukuthi unikeza ingane yakhe wonke amaqembu amane ezakhi ezibalulekile: amaprotheni, amacarbohydrates, amavithamini namaminerali, namafutha.
Ngaphandle kwalokho, i-fiber nayo idlala indima ebalulekile ekwakhekeni kwesistimu yokugaya ukudla okuphelele. Ukwengeza izinhlobonhlobo zefiber ngemifino ngokufaka imibala ekudleni kuphumelela kakhulu ezinganeni. Shintshanisa imifino esetshenziswa ekudleni kwengane yakho, bese uzama ukusebenzisa imifino emi-2-3 ngosuku. Eminye imifino eyingozi ingaqalwa kumenyu yokulunyulwa kwengane enezinyanga ezi-5 ubudala njengezaqathi, ithanga, isipinashi, isipinashi, …
Izimpawu zokuthi ingane yakho isilungele ukudla okuqinile
Izingane zizobonisa izimpawu zokwazisa abazali ukuthi sezikulungele ukungena esigabeni sokuncelisa. Izimpawu ezijwayelekile zifaka:
Ingane ikwazile ukuzihlalela ngaphandle kosizo. Uma izimo zingakuvumeli ukuba kube nesidingo sokuqala ukwethula okuqinile enganeni kusenesikhathi, abazali bangakwazi ukusekela ngokusebenzisa isihlalo noma isihlalo sokulumula esizinikele.
Umntwana ubambisana ukuze adle lapho umama efaka ukudla emlonyeni wakhe.
I-Baby izimisele ukuhlafuna noma yini lapho idliswa noma ihlafuna ichopho ngisho nalapho kungekho lutho emlonyeni wayo. Lolu phawu lufaneleka kakhulu ukuncelisa izingane ngokwendlela ye-BLW.
Umntwana angasebenzisa izandla zakhe ukubamba noma yini ayibonayo futhi ayifake emlonyeni ukuze ayihlafune.
Izingane zijabulela ngaso sonke isikhathi lapho zihlezi nokudla komkhaya.
UBaby ubuka abanye abantu bedla bese efinyelela ukudla akufake emlonyeni.
Imenyu yokulumula yengane enezinyanga ezi-5 ukuze ikhule kahle futhi ikhule kahle
1. Impushana yethanga exutshwe nobisi
Ithanga lidume kakhulu ngomphumela walo osebenzayo wokuzuza isisindo. Ngaphezu kwalokho, ukunambitheka okumnandi kwalesi sithelo kwenza izingane eziningi zisithande.
Gcoba ithanga bese ulifafaza/lihlunge.
Impushana elungele ukudliwa noma impushana yasekhaya.
Xuba izithako ezi-2 eseziphekwe ngaphambilini nobisi bese uphakela ingane yakho lisafudumele, ngakho ungalidli libanda kakhulu.
2. Impushana yamazambane, amaqanda, ukholifulawa.
Kusukela ezinyangeni ezi-5, izingane zingadla izikhupha zamaqanda, ngakho omama bangaqiniseka lapho bengeza amaqanda kumenyu yokulunyulwa kwezingane ezinezinyanga ezingu-5 ubudala.
Hlanza ubhatata, uwushuke, uwugaqe bese uwuhlanganisa nobisi lwebele noma ifomula.
Ukholifulawa ophekwe futhi ocutshiwe.
I-1/5 yezikhupha zamaqanda ezixutshwe nobisi.
3. Impuphu yamazambane, ukholifulawa, ubisi.
Amazambane athathwa njengokudla okunesitashi okuphephile kwezingane. Ngaphezu kwalokho, izitsha zamazambane zilula kakhulu ukuheha izingane, ngakho-ke lokhu kuyisiphakamiso esihle kumenyu yokulunyulwa kwengane enezinyanga ezingu-5.
Amazambane aphekiwe kanye nokholifulawa kuyagaywa futhi kuhlanganiswe nobisi lwebele ukuze kube lula ezinganeni ukugwinya.
4. Impushana yenyama yenkukhu yamazambane amnandi.
Inkukhu iyisithasiselo seprotheyini enempilo yezingane ezisezigabeni zokuqala zokulunyulwa. Abazali kufanele bethule ingane yabo inyama emhlophe njengenkukhu, ingulube, nenhlanzi emhlophe ngaphambi kokuba bayinike inyama yenkomo noma i-salmon.
Khetha isifuba senkukhu esishisiwe bese usihlikihla noma usihlinze.
Ubhatata oshisayo nogayiwe.
Pheka inhlama kahle, bese ufaka inkukhu namazambane ugovuze kahle.
5. Inyama yengulube nemifino
Uma ingane ijwayele inkukhu, umama kufanele ashintshe ukudla komntwana ngenyama yengulube. Ukushintsha ukunambitheka kuzosiza imenyu yokudla yengane enezinyanga ezingu-5 ibe cebile, ingane izoyijabulela kakhulu.
Inyama yengulube egayiwe, bese iyagoqwa bese ihlanzwa.
Isipinashi sigezwe, sisetshenziswe inani elincane ku-blender noma sigayiwe.
Uma inhlama isivuthiwe, engeza inyama nemifino bese upheka kuze kube yilapho imifino isivuthiwe.
Imenyu yokulumula yezinyanga ezi-5 ingane ngezinsuku ezingama-30 ngesitayela saseJapan
Izinsuku 1, 2 no-3:
Iphalishi netiye lebhali.
Uphuthu lwephalishi 1:10 (5ml) luyisidlo esilungele omama ukuqala ukudla ukulunyulwa kwesitayela saseJapan.
Ilayisi, amanzi kanye netiye lebhali lezingane.
Indlela yokupheka iphalishi:
Umama wabeka izipuni eziyi-10 zamanzi ahlungiwe kanye nethisipuni 1 zelayisi endishini encane noma esitsheni sephalishi ukuze afake esitsheni selayisi ukuze wonge isikhathi. Uma umndeni udla, ungasebenzisa amabhodwe okupheka amaningi ngokwesilinganiso esingenhla. Ngemva kokuba umntwana esephekiwe, sebenzisa isisefo noma ithawula elihlanzekile ukuze uhlanze iphalishi. Lena imenyu omama abangayisebenzisa ezinsukwini ezi-3 zokuqala zokuncelisa ingane yabo.
Izinsuku 4 no-5:
1:10 iphalishi elihluziwe (20ml) kanye nethanga eligayiwe noma ummbila ocushiwe oxutshwe nefomula noma ubisi lwebele.
Sefa iphalishi lethanga, ibhotela elihlanzekile elixutshwe nobisi lwefomula namanzi afudumele. Ngalesi sikhathi, umama angaxuba imifino nephalishi ukuze umntwana ezwe into entsha nsuku zonke. Inani lephalishi lomntwana ngalesi sikhathi lingakhuphuka libe ngu-35ml kakade.
Iphalishi 1:10 (35ml), isanqante egayiwe, amanzi afudumele. Umama kufanele abilise izaqathi esikhundleni sokubilisa ukuze agcine ubumnandi bemvelo bezaqathi ukuze asize ingane ibone ukunambitheka kangcono.
Uphuthu 1:10 (35ml), amazambane abondiwe, amanzi afudumele.
Iphalishi le-oatmeal, itiye lebhali. Kufanele usebenzise i-oats ephilayo ukuze uqinisekise impilo yengane yakho.
Iphalishi le-oatmeal, isithombo esimhlophe esigayiwe kanye nejusi emhlophe yesithombo.
Isanqante iphalishi, amazambane ecubuziwe, amanzi afudumele.
Iphalishi lesithombo esimhlophe, itiye lebhali.
Iphalishi lamazambane amnandi, itiye lebhali.
Iphalishi le-oatmeal, amazambane agayiwe ahlanganiswe nobisi lwefomula, amanzi afudumele.
Iphalishi le-carrot elixubene namafutha e-salmon (lingashintshwa ngamafutha e-walnut, amafutha omnqumo, amafutha e-Gac), amanzi afudumele.
Iphalishi elimhlophe elixutshwe namafutha ezingane ngendlela othanda ngayo, amanzi afudumele.
Iphalishi lamazambane amnandi, amanzi afudumele.
Iphalishi le-oatmeal, amazambane abunjiwe/ubisi lwebele, itiye lebhali.
Iphalishi le-oatmeal, isanqante egayiwe, amanzi afudumele.
Iphalishi eliphekwe nesipinashi elixutshwe namafutha e-salmon, amanzi afudumele.
Iphalishi le-oatmeal, i-pear egayiwe namanzi afudumele.
Iphalishi eliphekwe ngezikhupha zamaqanda namanzi afudumele.
Iphalishi eliphekwe ngesipinashi esimhlophe, itiye lebhali.
Usuku 24 + 25:
Iphalishi eliphekwe ngesipinashi namafutha e-salmon, ijusi yemifino ebilisiwe.
Iphalishi nge izaqathi namafutha e-salmon, amanzi afudumele.
Iphalishi lembewu ye-lotus ne-jujube, itiye lebhali.
Iphalishi le-bok choy namafutha e-salmon, amanzi afudumele.
Iphalishi eliphekwe ngesipinashi namafutha enhlanzi, ijusi yemifino ebilisiwe.
Amanothi okupheka iphalishi lengane enezinyanga ezi-5.
Imenyu yokulunyulwa kwengane enezinyanga ezi-5 ubudala ayixabani kakhulu. Ikakhulukazi iphalishi yisitsha esikhulu. Ukuqinisekisa ukuthi iphalishi limnandi futhi alilahlekelwa izakhi, omama kudingeka banake ezinye zalezi zinkinga ezilandelayo:
Ungasebenzisi amanzi abandayo ukupheka uphuthu lwezingane.
Ukusebenzisa amanzi abandayo ukupheka iphalishi kuzoncibilikisa izinto eziguquguqukayo erayisini kugcwale irayisi.
Kunalokho, sebenzisa amanzi ashisayo ashisayo ukupheka iphalishi ukuze kokubili ulondoloze umsoco ephalishini futhi wonge isikhathi sokupheka iphalishi ngokushesha.
Ungalibilisi iphalishi (ushise kabusha iphalishi) izikhathi eziningi ngosuku olungu-1
Eminyakeni engu-5 ubudala, inani lephalishi elidliwa umntwana lincane kakhulu, ngakho-ke sicela upheke kancane ekudleni kwengane ngayinye. Noma ukuze kube lula komama abamatasa, ungapheka uphuthu olumhlophe bese uluhlukanisa lube izidlo ezincane ezifanele ikhono lomntwana lokudla futhi uligcine esiqandisini.
Impela umama akufanele alishise kabusha iphalishi izikhathi eziningi. Ngoba ukushisisa kabusha iphalishi izikhathi eziningi kuzolahlekelwa amavithamini amaningi futhi lingasenabo ubumnandi balo bemvelo. Uma kwenzeka ingane ingakudli konke ukudla, abazali kufanele bakudle noma bakulahle esikhundleni sokukushisisa kabusha ukuze baphakele umntwana.
Kufanele ukhethe imifino yonyaka ukuqinisekisa ukuphepha kokudla.
Imifino yesizini izoqinisekisa ubusha futhi igweme izinkinga ezifana nezinsalela zezibulala-zinambuzane, izilondolozi noma izitshalo ezishintshwe izakhi… Qinisekisa ukuphepha kwempilo yezingane kanye neyezingane Siza izingane zizwe ukunambitheka okufanele kwemifino nezithelo.
Ngaphezu kwalokho, uma unezimo, kuhle ukuba umndeni usebenzise imifino etshalwe yodwa futhi etshalwe ngezindlela zemvelo ngaphandle kokusebenzisa umanyolo wamakhemikhali, izibulala-zinambuzane nezibulala-zinambuzane.
Ungakushisi ukudla emanzini ashisayo noma ukushiye endaweni efudumele.
Umgomo wokukuqeda kahle ukudla kanye nokuqinisekisa imisoco iwukusuka efrijini uye endaweni epholile futhi usuke endaweni epholile uye emazingeni okushisa asekamelweni ukuze ukudla kuphole ngaphambi kokupheka.
Omama akufanele basuse ukudla efrijini bakuyise ngaphandle ngokushesha noma basebenzise amanzi ashisayo ukuqanda ukudla. Ngoba lezi zindlela zokuqeda iqhwa zizokwenza ukudla kube lula kumagciwane nokulahlekelwa imisoco, ikakhulukazi inyama nenhlanzi. Uma usebenzisa lokhu kudla kumenyu yokulunyulwa kwengane enezinyanga ezi-5 ubudala, kuzodala ubuthi nokuphazamiseka kokugaya ukudla.
Uma umndeni wakho une-microwave noma idivayisi yokuqeda iqhwa ezinikele, ungayisebenzisa ukuze wonge isikhathi.
Inothi elincane lomama abasebenzisa amanzi edashi ukupheka uphuthu lwezingane zabo
Ungasebenzisi imifino engahambelani ukupheka i-dashi yengane yakho. Ezinye izinhlobo ezijwayelekile: isithombo esimhlophe esinezaqathi; bok choy nge ithanga; amazambane, ubhatata notamatisi, utamatisi namakhukhamba…
Imifino inamazinga okushisa ahlukene okuvuthwa, ngakho-ke idinga ukubekwa ngendlela yokuvuthwa kancane ukuze ivuthwe ngokushesha kohlobo ngalunye. Lokhu kuzovimbela izinto ekulahlekeni ngesikhathi sokupheka.
Ijusi ye-dashi eqandisiwe isetshenziswa kuphela phakathi neviki elingu-1. Ngakho-ke omama akufanele bafune ukuthenga kakhulu ngoba ikakhulukazi izingane ezinezinyanga ezi-5 ubudala, inani lephalishi elidliwayo lisencane.
Ngalesi sihloko, ngithemba ukuthi nginikeze ukwaziswa okwanele ukuhlomisa omama ukuba bangene ngokuqinile “empini” yokulumula ngaphandle kwezinyembezi, ngaphandle kokuthethisa nezingane zabo. Inhlanhla bomama.